आजबाट १४ गतेसम्म यी दुई राशिको भाग्यमा हुनेछ सुखको वर्षात ! मिल्नेछ अत्याधिक लाभ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»आजबाट १४ गतेसम्म यी दुई राशिको भाग्यमा हुनेछ सुखको वर्षात ! मिल्नेछ अत्याधिक लाभ!
आजबाट १४ गतेसम्म यी दुई राशिको भाग्यमा हुनेछ सुखको वर्षात ! मिल्नेछ अत्याधिक लाभ!
By मनिषा थापा on ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:३० धर्म/दर्शन
पिएनपिखबर, भक्तपुर : आज मंगलबारको दिन सूर्यले आफ्नो चाल परिवर्तन गरेको छ । हिजो अधिक मासको पहिलो सोमबार थियो। अधिक मास भगवान कृष्णको महिना हो भने सोमबार शिवजीको बार हो। जसका कारण विशेष प्रकारको संयोगहरु बन्ने हुन्छ।
यहि महिना शिवजीको पूजा आराधना गर्नाले हरेक इच्छा पुरा भएर जाने हुन्छ भने श्रीकृष्णको आराधना गर्दा भने मुक्ती मिल्ने हुन्छ। अबको एक लगभग एक हप्ता यानीकि आज देखि २८ मे सम्म निम्न उल्लेखित राशिहरुलाई फाइदा हुने वाला छ। हेर्नुहोस्:
यस राशी हुनेहरुको कुण्डलीमा चन्द्र चौथो भावमा रहनाले लाभ मिल्ने हुन्छ। तपाईलाई घर-परिवारबाट हरेक कार्यमा भने जस्तै सहयोग मिल्न सक्ला। घर-परिवारबाट व्यवसायमा समेत साथ मिल्ने देखिन्छ। यस समयमा अत्याधिक शुख-भोग गर्ने अवसर मिल्न सक्ला। भौतिक,आधात्मिक,सामाजिक,आर्थिक,पारिवारिक शुखको भोग गर्न पाउदा तपाईको मानसिक अवस्था समेत आनन्दित रहने देखिन्छ। जागिर गर्नेहरुको पनि उच्च कोटीको समय व्यतित हुने देखिन्छ तर प्रेम सम्बन्धमा भने केहि हद सम्मको सावधानी अपनाउनु होला।
यस राशी हुनेहरुको कुण्डलीमा चन्द्र पाँचौ भावमा रहने हुँदा उच्च कोटीको लाभ मिल्न सक्ला। यस समयमा तपाईलाई आर्थिक रुपमा हरेक प्रकारका शुख मिल्न सक्ला। पुराना योजना सम्पन्न भएता पनि नयाँ योजनाको थालनी भैहाल्ने हुँदा यस समय तपाई व्यस्त रहनु हुने देखिन्छ। कारोबारमा समेत तपाईको एस्सुधार आउन सक्ला। नसोच्नु भएको अवसर प्राप्त रहने हुँदा आर्थिक अनि सामाजिक रुपमा तपाईको स्थितिमा सुधार आउन सक्ला। तर जागिर स्थलमा भने सावधान केहि हद सम्मको अपनाउनु होला।